“1-1 ayuu ku dhammaaday kulanka.”. Jose Mourinho oo inkirsan guul daradii xalay ka soo gaartay Hull City – Gool FM
“1-1 ayuu ku dhammaaday kulanka.”. Jose Mourinho oo inkirsan guul daradii xalay ka soo gaartay Hull City
(England) 27 Jan 2017. Inkastoo Man United ay u gudubtay final-ka EFL Cup misane waxay guul daro 2-1 ah xalay kala kulantay Hull City, laakiin Jose Mourinho ayaa inkirsan guul daradaasi isagoona sheegay inuu kulanka ku dhammaaday 1-1.
Tababaraha reer Portugal ayaa sidoo kale aaminsanayn in Man United ay tahay kooxda ugu cad cad inay ku guuleysato koobka marka ay Southampton la ciyaari doonaan Final-ka 26-ka Feebaraayo.
Guul darada soo gaartay Red Devils ayaa soo afjartay 17-kulan oo dhulka la dhigi waayay wiilasha Jose.
“Ma aaminsani inaan nahay kooxda ugu cad cad.” Murinho ayaa sidaa u sheegay saxaafadda kulanka kaddib.
“Wax micno ah malahan kooxda aan wajaheyno, marna ma dhihin kuwa ugu cad cad, sida caadiga ah garoonka waa mid dabeyl leh wayna adag tahay.
“Waan faraxsanahay, waxaan aaminsanahay inay cajiib tahay 17-kulan oo aan lagaa badin. Ma guul darreysan, waxay ahayd 1-1, labo gool oo kaliya ayaan arkay, waxaan arkay goolkii Pogba iyo midkoodii, gool cajiib ah, wax qabad wayn, karoos wayn.”.
“Waxaan isku dayayaa inaan Cristiano Ronaldo kala haldo inuu ku soo biiro Inter Milan.”.
RASMI: Bille Muxudiin Buraale oo ka tagay kooxda Dekedda